Hafanàm-po nomerika · Desambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Desambra, 2010
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Desambra, 2010
Afrika Mainty 27 Desambra 2010
Na dia efa tsy milamilana be ihany aza ny rivotra iainana any Côte d'Ivoire, dia niakatra zana-tohatra vitsivitsy indray ny fihenjanana nandritra ny andro faramparany teo. Taorian'ny korontana tamin'ny 12 Desambra teo amin'ny antoko roa mpifanandrina sy ny fanalavàna ny tsy fahazoana mivoaka amin'ny alina nataon'i Laurent Gbagbo, dia miantso ny vahoaka ankehitriny i Alassane Ouattara sy ny mpiara-dia aminy mba "hanao fanoherana faobe am-pilaminanana sy ara-demokratika mba hametrahana ny fitantanana ara-dalàna sy ara-drariny". Maneho fihetseham-po mialoha ilay fotoan-dehibe mamaivaiy loatra ny mpitoraka bilaogy:
Oman: Sàngany amin'ny fitorahana bilaogy no mitantara ny aminy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Desambra 2010
Ny bilaogy ao Oman, tahaka ny any an-kafa aty amin'ny faritra, dia tsy malaza loatra miohatra amin'ny toeram-pifanakalozan-dresaka (forum) amin0ny aterineto, saingy nisy fitoboroboany kosa ny fitorahana bilaogy tato anatin'ny taona vitsy. Global Voices dia nitafatafa tamin'i Muawiyah Alrawahi, tanora iray mpitoraka bilaogy namporisika ny Omanis (ilazàna ny olona avy any Oman) mba hitoraka bilaogy sy hanokatra adihevitra ho an'ny daholobe eo amin'ny firenen-dry zareo, amin'ny fanamafisana fa "ny olana tsy ifanakalozantsika hevitra no olana tsy ho voavahantsika".
Venezoela: lany ilay volavolan-dalàna handrindràna ny aterineto
Amerika Latina 25 Desambra 2010
Tamin'ny Alatsinainy 20 Desambra lasa teo, dia nandàny ny volavolan-dalàna izay manome fahefana ireo Mpanatanteraka handrindra ireo zavatra rehetra azo tsidihana ao amin'ny Aterineto any Venezoela ny Parlemanta Venezoeliana. Amin'ny alalan'ny sampan-draharaham-pitantanana, ny CONATEL, dia manana andraikitra hisakana ireo zavatra rehetra mety hifandona amin'ny antoko faha 28 sy 29 ireo ISP mpanome tolotra aterineto rehetra any Venezoela
Côte d'Ivoire: Manahy ny vanim-potoana vaovao hisian'ny fandrahonana any Abidjan ny mpampiasa Aterineto Ivoriana
Afrika Mainty 24 Desambra 2010
Mihamahery setra tsikelikely ny krizy ara-politika any Côte d'Ivoire. Raha ny hevitry ny Firenena Mikambana, dia olona 50 no maty ary 200 no naratra nandritra izay telo andro farany izay. Nesorina tamin'ireo fampisehoana tantara misy herisetra nandritra ireo ady sasany ny haino aman-jery nentim-paharazana fa ny mampiasa aterineto koa dia niezaka ny naneho ny horonan-tsary sasany ahitana ireo herisetra manodidina ny firenena.
Iran: Mpitoraka blaogy kely taona indrindra maneran-tany voasambotra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Desambra 2010
Tsy fanta-daza eo amin'ny fanenjehana mpitoraka blaogy fotsiny ny governemanta Iraniana, fa mitàna ny laharana voalohany koa izy ireo eo amin'ny sehatra maro: nanomboka tamin'ny fampidirana am-ponja ny mpitoraka blaogy voalohany indrindra teo amin'ny tantara, hatramin'ny nahafatesan'ny mpitoraka blaogy voalohany tany am-ponja. Mampalahelo anefa, fa mbola misy zavatra hafa mbola mahatsiravina noho izany tokony ampidirina ao anatin'ny lisitry ny firenena Iraniana eo amin'ny fahaiza-manaony dia ny fisamborana sy fitsaràna mpitoraka blaogy kely taona indrindra.
Chile: Bilaogy manohitra ny fanenana ny ora fampianarana ny Tantara
Amerika Latina 13 Desambra 2010
Ny bilaogy Historia y Reforma [es] (Ny Tantara sy Fihavaozana) dia nanangona ireo “hevitra samy hafa manohitra ny fanenana ny ora fampianarana ny Tantara izay niparitaka tamina media sy tambajotra ara-tsosialy samihafa. Mandritra izay fotoana izay ihany, dia afaka hahafantatra mikasika ireo hetsika isankarazany nokarakaraina mba hiarovana ny fampianarana ny...
Iran: Miresaka ireo antontan-taratasin'ny Wikileaks ny mpitoraka bilaogy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Desambra 2010
Ireo antontan-taratasy momba ny Cablegate an'i Wikleaks dia nampiseho ireo fifamatorana maizina eo amin'i Iran sy Afghanistan; vaovao anatiny mikasika ny fitondrana Iraniana sy ny mpanohitra; ary ny tahotry ny tontolo Arabo manoloana ny politika noklearin'i Iran. Naneho hevitra mikasika ireny ampamoaka ireny ireo Iraniana mpitoraka bilaogy, indraindray miaraka amina...
Cablegate: Lesona momba ny teknolojian'ny fangaraharana
Fitantanam-pitondrana 08 Desambra 2010
Ny telegrama mahatratra hatramin'ny 250.000 ifandraisan'ny Departemantam-panjakana sy ny Masoivoho Amerikana antsoina hoe "Cablegate" avoakan'ny Wikileaks no raharaha mahoraka indrindra eo amin'ny gazety sy ny fitondrana isan-karazany amin'izao fotoana izao. Renata Avila no mijery hoe tahaka ny ahoana no ampianaran'ny Cablegate antsika ny antsoina hoe teknolojian'ny fangaraharana.
Tonizia: Mitohy ny sivana, manohy ny diany ireo Telegraman'ny Wikileaks
Tonizia 08 Desambra 2010
Nitsoratsoraka tamin'ireo Cables (Avy amin'ny mpandika: ndeha hatao hoe "hafatra maika") farany Wikileaks nalefan'ny Masoivoho Amerikana ary nanolotra tranonkala vaovao hemerenana mamoaka sy miady hevitra momba ireo ampamoaka mikasika ny firenen-dry zareo ny mafàna fo Toniziana. i Nawaat no namokatra ny Tunileaks, ora iray taorian'ny nipariahan'ireo hafatra nalefan'ilay tranonkala tamin'ny Alahady 28 Novambra.
Hetsika ho fampanginana ny Cablegate sy ny Wikileaks, loza mitatao amin'i Assange
GV Mpisolovava 07 Desambra 2010
Tandindonin-doza i Julian Assange, mpanangana ny Wikileaks ary iharan'ny fanenjehana ny tetikasany Wikileaks. Herinandro taorian'ny namoahana ireo antontan-kevitra marobe nokilasiana ho tsiambaratelo, antsoina hoe CableGate, hatramin'ireo mpanao politika àvy no nilaza ny fanirian-dry zareo “hihaza azy” sy hahita azy “maty“. Manja ery ny famintinana ireo fanehoan-kevitra nataon'ny OpenDemocracy: Araka ny...